Nidaamka Kajoojinta Diiwaangelinta
Markaad iibsanayso rukumada Bixinta, si otomaatig ah ayaa lagugu soo dallici doonaa isla maalinta bil kasta. Haddii waqti uun aadan u baahnayn rukhsaddaada TurboMedia.io, noogu soo dir farriin boggayaga Xiriirkeena waxaanan dejin doonaa koontadaada inay ku dhammaato dhammaadka rukummadaada bishaan socota. Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad joojiso rukumadaada wakhti kasta. Haddii tusaale ahaan, aad iska diiwaangaliso 23-ka bisha, laakiin noo qor wax ku saabsan joojinta akaaagaaga 10-ka bisha dambe, waxaan xisaabtaada u dejineynaa inuu baabi'iyo 13 maalmood kadib, dhammaadka rukumadaada bishaan socota. Haddii aad doorbidi lahayd joojinta deg-degga ah, si fudud noogu soo sheeg oo annagana sidaas ayaan kuugu samayn karnaa. Khasab kuguma aha inaad ku sii jirto rukhsad wakhti kasta, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad qoraal noo soo dirto markaad diyaar u tahay inaad baabiiso. Ka dib waanu qaban doonnaa oo waxaan kuu soo diri doonaa farriin xaqiijin ah.
Haddii aad iibsato qorshe raasumaalka ah oo aadan ku faraxsanayn adeegga sabab kasta, fadlan nagala soo xiriir maalmaha 7 ee taariikhda lacag bixintaada rukunka waxaanan si buuxda u soo celin doonaa oo tirtiri doonaa liiskaaga. Haddii aad nala soo xiriirto wax ka badan maalmaha 7 ka dib markaad lacag bixiso oo aad codsato lacag celin, kooxdayada ayaa dib u eegaysa koontadaada iyo haddii aan ku habboonayn, si buuxda u soo celin doonto amarkaada, ama ugu yaraan, waxay ku soo celin doontaa qadarka maalmaha aan la isticmaalin bisha.
Waxaan kaa aruurineynaa macluumaadka marka aad iska qorto joornaaladayada. Markaad dalbanayso ama iska diiwaangelinayso bartayada, sida ku habboon, waxaa lagu weydiisan karaa inaad gasho: cinwaanka emaylkaaga ama macluumaadka kaarka deynta.
Si loola shaqeeyo muqaalka
Si aad u soo dirto emails Periodic
Waxaan hirgalinnaa dhowr talaabooyin amniga ah si aan u ilaalino badbaadada macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed markii aad amarto Amar Waxaan bixinaa adeegsiga kumbuyuutar aamin ah. Dhammaan macluumaadka xasaasiga ah / macluumaadka amaahda ee la soo gudbiyey waxaa lagu gudbiyaa tikniyoolajiyada Secure Socket (SSL) ka dibna lagu kaydiyaa kaydiyadeena Bixiyaha Kaliya si ay u helaan kuwa u oggolaanaya xuquuqda marin gaar ah ee nidaamyada noocaas ah, waxaana looga baahan yahay inay macluumaadka xafidaan. Macaamil ka dib, macluumaadkaaga gaarka ah (kaararka deynta, lambarada amniga bulshada, dhaqaalaha, iwm.) Laguma keydin doono macaamiisheena.
Haa (Kukiyada ayaa ah faylal yaryar oo shabakad ama adeeg bixiyeyaashiisa ay ku wareejiso kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka adag ee loo adeegsado biraawsarkaaga internetka (haddii aad oggol tahay) taas oo awood u siineysa boggaga ama nidaamyada adeeg bixiyaha inay aqoonsadaan biraawsarkaaga isla markaana ay soo xusuusiyaan macluumaadka qaarkood waxaan u isticmaalnaa cookies naga caawi inaan xasuusano oo aan socodsiino sheyga ku jira galkaaga wax iibsiga, fahamka iyo keydinta waxyaabaha aad doorbiddo ee booqashooyinka mustaqbalka oo aan isu soo uruurino xog ku saabsan taraafikada goobta iyo is-dhexgalka goobta si aan u soo bandhigo khibradaha iyo qalabka mustaqbalka ee wanaagsan. iyo / ama iibsiyada VIP xaq uma laha dib-u-soo-celinta, si adag ayaa loo xoojiyaa.Taas oo ay ugu wacan tahay adeegga tooska ah ee khadka tooska ah ee loo yaqaan 'processor desktop' waa mid sugan oo sharci ah, isla markaana aan wax dacwad ah la soo oogi doonin macaamiisha mooyee waqtiga iibsashada. Waxaan xaq u leennahay inaan diidno adeegga TurboMedia.io ee adeegsadayaasha ku xadgudba nidaamka.